Bangigga Aduunka Oo Diiday Lacag Uu Siin Lahaa Soomaaliya
Wednesday October 21, 2020 - 09:49:06 in News by Xaaji Faysal
Mas'uuliyiin ka socday wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka Hirshabeele,
Shirkaan wadatshiga oo ay soo qaban qaabiyeen Wasaaraddaha Qorsheynta Qaranka iyo maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ooxoogga lagu saarayo sidii wax looga qaban lahaa abaaraha, fatahaadaha, ayaxa iyo Cudurka covid-19, ayaa waxaa dowladda Soomaaliya ka taageeraya Bankiga adduunka.
Agaasimaha wasaaradda qorsheynta maamulka Hirshbeele Cabdulaahi Maxamed Xasan (Dhagacade) oo furitaanka shirka hadal kooban ka jeediyay ayaa sheegay in shirkan dib loogu eegayo dhibaatooyinkii la soo maray oo ay ka mid ahaayeen daadadka, Abaaraha, Ayaxa iyo cudurka covid-19 oo halakeeyay dunida intiisa kale,maamul ahaana diyaar u yahiin hanaanka wax looga qabanayo in ay xoogga saaran.
Asad yuusuf Qanyare oo ah madaxa xiriiraha qaran eedeeqa caalamiga ah ee wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka ayaa sheegay inuu shirka ujeedkiisu uu yahay sidii looga hortegi lahaa xasaradaha soo noq noqday ee abaaraha, dadaadka, ayaxa iyo cudurka covid-19. Diyaarinta mashruucan waxaa lagala tashaday wasaaradaha ay quseeyso heer fedaraal iyo heer dawlad goboleed.
Wasaaradaha maaliyadda iyo qorsheynta heer federaal waxa ay in muddo ah ka shaqeeynayeen qaabdhismeedka lagu hirgelinayo mashruuca iyo shaqaaleynsiinta howl-wadeenada mashruucan; waxaa jiray shuruudo adag oo uu bankiga aduunku ku xiran maalgelinta mashruucan oo ay lagama maarmaan tahay in lafuliyo si loo soo daayo lacagaha. waxaa ka mid ah diyaarinta dokumeentiga mashruuca, sharciga, heshiiska maalgelinta iyo diyaarinta howlwadeenada laf dhabarka u ah mashruuca.
– Qaab dhismeedka maamulka mashruucu waxa uu ka kooban yahay saddex heer oo kala ah;
– Gawl-wadeenada maamulka mashruuca ee heer dowlad goboleedka. (spt).